देउवाले निधिलाई किन फकाए ? कारण…. – Namaste Dainik
देउवाले निधिलाई किन फकाए ? कारण….
August 16, 2020 August 16, 2020 NamastedainikLeaveaComment on देउवाले निधिलाई किन फकाए ? कारण….
काठमाडौँ — कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उठ्न तयारी थालेका छन् । यसले संस्थापन पक्षभित्र हलचल मात्रै मच्चाएको छैन, सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका निधिले गत बिहीबार सभापति देउवासँग चौधौं महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । १३ औं महाधिवेशनमा दिएको बचन स्मरण गराउँदै निधिले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा देउवालाई संस्थापन पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवारमा आफूलाई अघि बढाउन प्रस्ताव राख्दा उनले भने आफैं उठ्ने जवाफ दिएका थिए । देउवानिकट स्रोतका अनुसार निधिले ‘आगामी महाधिवेशनमा तपाईंकै क्यान्डिडेट हुन चाहन्छु, तपाईंको साथ र सहयोग मलाई चाहियो’ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था सम्झाउँदै १५ औं महाधिवेशनमा सघाउने बचन दिएका थिए । उनले यस्तै बचन १३ औं महाधिवेशनका बेला पनि दिएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निधिको दलिल छ ।
‘अर्कोपटक म हुन पाउन्न, तपाईंबाहेक मेरो अर्को यो उचाइको नेता पनि छैन, यसबीचमा तपाईंले मधेसमा मात्रै नभएर पहाड र हिमालमा समेत आफ्नो प्रभाव बढाउनुहोस्, अर्कोपटक तपाईंलाई नै सघाउने हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बूढानीलकण्ठस्थित स्रोतले भन्यो, ‘तर निधिजीले उमेरको फ्याक्टर र आफूपछि आक्रामक ढंगले अघि बढेको पुस्ताको कारण देखाउँदै यसैपटक उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेर जानुभयो ।’
निधिको तयारी भने पहिल्यैदेखि थियो । अहिले आएर मात्रै उनले देउवालाई जानकारी गराएका हुन् । निधिको पहिलो चाहना देउवालाई सम्मानजनक अभिभावकीय भूमिकामा राखेर संस्थापन पक्षबाट आफू उम्मेदवार बन्नेछ । त्यसका लागि उनले विभिन्न नेता र समूहहरूसँग छलफल र परामर्श अघि बढाइरहेका छन् । ‘निधिजी देउवाको विरासतकै रूपमा अघि बढ्न खोज्नुभएको छ, त्यसका लागि बरु देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई महामन्त्री वा कुन पदाधिकारीमा राख्नुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ तयार हुनुहुन्छ,’ निधिनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिले छाड्दै छाड्नुभएन भने पनि उहाँले उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने गरी तयारी अघि बढाएको मैले पाएको छु ।’
निधिले पछिल्लोपटक संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग मात्रै नभएर इतरपक्षसँग पनि भेटघाट बाक्लो बनाएका छन् । नेविसंघको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा आफ्नो टिममा रहेका नेतादेखि पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । निधि संघको तेस्रो अध्यक्ष हुन् । संघमा रहँदा आफैंले बनाएका पदाधिकारी तथा सदस्यमध्ये कतिपय अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमै छन् ।
तयारीको सिलसिलामा उनले संगठनमा पकड र प्रभाव राख्ने स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्तासँग समेत दिनहुँ सम्पर्क बढाइरहेका छन् । निधिको संगठनको मूल आधार मधेस हो । पछिल्लोपटक पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत उनले आफ्नो समूह खडा गर्दै लगेका छन् । सबै पक्षका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र कार्यसमिति बाहिर रहेका नेताहरूलाई समेत उनले निवासमा डाकेर छलफल गर्न थालेका छन् । निधिले आफूले गरिरहेको छलफल पार्टीमा बृहत्तर एकताका लागि सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताए । साढे दुई वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनका लागि पार्टीभित्र बृहत् एकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गराउन सक्दा आमनागरिकमा भरोसा जाग्न सक्छ । ‘संविधानका उपलब्धि र राजनीतिक प्रणालीको रक्षाका लागि कांग्रेसले बहुमत ल्याउन आवश्यक छ, त्यसका लागि पार्टीभित्र एकता हुनुपर्छ, एकताका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनले ठूलो सन्देश दिन्छ,’ निधिले भने, ‘यही दिशामा छलफल चलाइरहेको छु, त्यसमा मेरो आवश्यकता भयो र फिट हुनुपर्‍यो भने म तयार छु ।’
पार्टीको ‘नेटवर्किङ’ पकडबाहेक देउवासँग आमनागरिकलाई अपिल गर्ने मुद्दा र एजेन्डा छैनन् । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी र सरकार भएका बेला ०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा पार्टीले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका तीनैवटा तहमा नराम्रो हार व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसअघि पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयका कारण देउवा अहिले पनि पार्टीभित्र आलोचित छन् । पार्टी सञ्चालनमा समेत उनीमाथि प्रश्न खडा भएका छन् । ०७२ फागुनमा सभापति निर्वाचित भएपछि देउवाले पार्टीलाई भन्दा सत्ता प्राप्तिलाई बढी प्राथमिकता दिए । सत्तातिर मात्रै ध्यान दिँदा पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।
दसौं वर्षदेखि तदर्थवादमा चलेका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनसमेत देउवाले गर्न सकेनन् । अहिले सबैजसो भ्रातृ संस्था तदर्थवादमा चलेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू समेत उनले समयमै गठन गर्न सकेनन् । वैधानिक कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको घोषणा भइसकेपछि उनले विभागहरू गठन गर्न थालेका छन् । उनको यो शैलीलाई संस्थापनइतर पक्षले महाधिवेशनमा मुद्दा बनाउने उद्घोष गरेर गतिविधि थालेको छ ।
निधि पनि आगामी आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई एक नम्बरमा ल्याउनका लागि अहिले नेतृत्वमा रहेका पुस्ताबाट सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनको भित्री चाहना देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवैले अभिभावकको भूमिकामा रहेर आफूपछिका नेताहरूलाई नेतृत्वमा अग्रसर गराउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि उनको पहिलो प्राथमिकता देउवाकै समर्थनमा आफू उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ । तर देउवाले नछाडे निधिले के गर्लान् भन्ने आमचासो संस्थापन पक्षमा चर्चा बनेको छ । निधिनिकट नेताहरू भने देउवाले नछाडे पनि उम्मेदवार हुने तयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । निधिले भने यस विषयमा निर्णय गर्ने बेला भइनसकेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘अहिलेसम्म छलफलमै छु । कसैले पनि आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गर्ने र छलफल गर्ने काम गरेको छैन । बरु मैले नै सहमतिका लागि छलफल अघि बढाएको हुँ,’ उनले भने, ‘सहमति नभए के गर्ने भन्ने पछि नै निर्णय गर्छु ।’
निधिले चौधौं महाधिवेशनलाई आफ्ना लागि सबैभन्दा अनुकूल परिस्थिति ठानेका छन् । त्यसपछि युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको पुस्ताले आफूहरूलाई समेत नछाड्ने उनको बुझाइ छ । निधि अहिले ६५ वर्ष पुगेका छन् । १५ औं महाधिवेशनमा उनी ७० वर्षका हुनेछन् । त्यतिबेला उमेर र युवाको प्रभावले पनि आफूहरूलाई अनुकूल नहुने उनको बुझाइ छ । अहिले नै पार्टीको विचार निर्माणमा नेतृत्व तहको भन्दा तल रहेका युवाको भूमिकाले काम गर्न थालेको छ । यही परिस्थितिलाई नियाल्दै निधिले यसैपटक आफू उम्मेदवार बन्न तयारी थालेका हुन् ।
नेतृत्व लिनका लागि संस्थापन इतरपक्षमा आधा दर्जन नेताहरूको संघर्ष चलिरहँदा संस्थापन पक्षमा देउवालाई मात्रै उम्मेदवार ठानिएको थियो । एकाएक निधिले आफू उम्मेदवारका रूपमा अघि बढेको जानकारी गराएपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । निधिलाई साथ लिन नसके देउवाको ‘नेटवर्किङ’ पकड भत्कन सक्ने कतिपय नेताहरूको विश्लेषण छ । ‘पार्टीमा देउवाको बलियो पकड कायम राखिराख्नुका पछाडि निधिको तराई–मधेसको प्रभावले निकै काम गरेको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘निधिलाई टिममा राख्न सक्नुभएन भने सभापतिलाई परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन कठिन पर्ने देखिन्छ ।’
श्रीमतीलाई कुटपिट गर्दा ग`र्भमा रहेको सात महिने शिशुको मृ`त्यु
सुनको भाउ आकासिदा पनि तिन हप्तामै बिक्यो २५१ किलो सुन।
लेबनानमा रासायनिक पदार्थ भण्डारण शक्तिशाली विस्फोटमा एक सय भन्दा बढीको मृत्यु, चार हजार भन्दा बढी घाइते
पदले होइन कामले रच्छ इतिहास : कुलमान घिसिङ